Yetatu beta yeWatchOS 3 inowanikwa kune vanogadzira | Ndinobva mac
Yetatu beta yeWatchOS 3 inowanikwa kune vanogadzira
Masikati ezuva ranhasi ari kuita zvine mutsindo uye pamusoro pekuti Apple yatanga chirongwa chitsva cheOS X El Capitan, yatanga zvakare mabetas matsva ezve ichave mashandiro matsva ezvigadzirwa zvawo kubva munaGunyana. Zviri pachena kuti munaGunyana Keynote tichaona zvigadzirwa zvitsva senge iyo iPhone uye pamwe Apple Watch nyowani uye ndeyekuti masystem nyowani anokodzera michina mitsva uye mitsva.
Masikati ano beta yechitatu yeWatchOS 3 yakavhurwa zvakare, chirongwa chakachinja zvakanyanya zvine chekuita nechinyakare watchos 1. Nechekare mune yekupedzisira Keynote Apple yakaisa patafura dzimwe dzenhau dzinozoverengerwa mune ino system, asi sekuziva kwedu tese, iwo mabetas ari kuzoitika achatiratidza dzimwe nhau uye dzakawanda.
Nhasi kwave kutendeuka kweyechitatu beta yeWatchOS 3 uye yatovepo kurodha pasi kubva paApple webhusaiti webhusaiti uye kuburikidza nekuvandudzwa kweiyo beta vhezheni izvo vavaki vatoisa kare. Isu tinokuyeuchidzai zvakare kuti iyo beta vhezheni idzo dzisina kugadzikana shanduro uye kuti mune yechitatu beta, inova ndiyo yakatangwa Tingave takatarisana ingangoita makumi mashanu muzana chirongwa cheanenge ari ekupedzisira vhezheni.
Saka kana usiri mugadziri uye urikushandisa yako Apple Tarisa zuva nezuva, zviri nani kuti umirire isu kuti tibudise nhau dzinounzwa nemabhatas uye usashingaire kusiya zvishandiso zvako zvakavharwa kana zvisingashandisike.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Yetatu beta yeWatchOS 3 inowanikwa kune vanogadzira
Nei usingafanire kutenga iyo iPhone 6s kana 6s Plus izvozvi
Apple inoburitsa vhezheni nyowani ye OS X El Capitan 10.11.6